राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतम कि डा.युवराज खतिवडा ? – KhojPatrika
राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतम कि डा.युवराज खतिवडा ?
खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ भदौ १६, २० :२४ बजे
काठमाडौं । गुट र उपगुट झांगिएको सत्तारुढ दल नेकपामा चर्चाका पात्र बनिरहेका छन्, उपाध्यक्ष बामदेब गौतम । कुनैबेला राष्ट्रियसभामा जान्न बरु संसदीय चुनाव लड्छु भन्ने बामदेब अहिले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाईमा छन् । बामदेबकै ६ बँदेका कारण नेकपाभित्र चुलिएको बिवाद सहमति उन्मुख देखिएको छ । तर राष्ट्रिय सभामा बामदेबले प्रवेश नपाए दुई अध्यक्ष फेरी दुईतिर हुने अवस्था आउनसक्छ । राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउन सकिने पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन पुरा हुने बाटो कुर्दै दंग परेका गौतम अहिले निरास बन्न थालेका छन् ।
ओली र प्रचण्डबीचको टकरावले राजनीतिक अस्त्रमै सिमित भएको बामदेवको सत्ता सयरको सपना पुरा नहुने संकेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै गरिसकेका छन् । हुनत, प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेर बेचैन जस्तै बनेका बामदेव बेलाबेलामा चर्चामा आइरहेका छन् । राष्ट्रियसभामा जान्न बरु संसदीय चुनाव लड्छु भनेर चर्चामा आएका बामदेबलाई कहिले पाल्पा त कहिले डोल्पा देखाइयो । काठमाडौंबाट बामदेवका लागि सिट छाड्छु भन्दै रामवीर मानन्धरले हात उठाएर चर्चामा ल्याइदिए । रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि खाली भएको पोखरा उपनिर्वाचनमा समेत बामदेवको चर्चा चल्यो । तर हेर्दाहेर्दै समय गुज्रियो ।
बामदेवका लागि उपचुनाव चर्चामा मात्रै सिमित भयो । नेकपाभित्र विवाद चुलिदा अफ्ठ्यारो परिस्थितिबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै बामदेवलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको प्रस्ताव गरे । बामदेवले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राखेर संविधानको धारा परिवर्तनको प्रस्ताव राखेपछि अर्को चर्चा सुरुभयो । पार्टीले उपध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिसभामा मनोनित गर्ने भन्दै निर्णय गरेको ६ महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन । अध्यक्ष द्धय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको मनमुटाब र द्धन्द्धको मध्यमार्गी निकास भन्दै ६ बुदे प्रस्ताव अघि सारेर चर्चामा आएका बामदेब अध्यक्ष द्धयको कार्यदलपछि गुमना देखिए ।
अहिले राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकी अधिकार जसरी यताउता गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रियसभाको आकांक्षाले उनै बामदेब पुन चर्चामा आएका छन् । सत्ता नै संकटमा पर्दा जोगाउन भुमिका खेलेका गौतम अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि धोका दिन लागेको भन्दै चिढिएपछि नेकपाको किचलो थप दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुने आँकलन नेकपा बृत्तमा चलेको छ । तर बामदेब आफू कुनैपनि गुटमा नरहेको दाबी गर्दै आन्तरिक किचलोको दोष अन्य नेतामाथी नै लगाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिस्थापन गर्दै आफ्नो आर्थिक नीति लागु गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने चाहना देखाएका बामदेवको सपना साकार हुन्छ वा बिवाद थप बढेर नेकपा थप संकटमा फस्छ ? केही समयपछि आफै सतहमा आउनेछ । गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अनि पछिल्लो समयका राजनीतिक नियुक्तिहरुप्रति प्रचण्ड र माधव नेपाल समेतले जारी राखेको असन्तुष्टी थप बढ्दै जाने हो भने नेकपा कुनैपनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #नेकपा, #राष्ट्रिय सभा